Sisiny sy ny afovoany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manoloana ireny dia tsy andrenesam-peo ny governemanta fa « tony dia tony ». Miasa mangina angamba. Saingy ny fiainam-bahoaka mitotongana tsy mety mangina : olan’ny jiro sy rano, asa efa mandeha ve ny lava-drano, ny kere any Atsimo sy ny fifindra-monina, ny tsy fandriam-pahalemana isam-baravarana manerana ny Nosy, ny vidin’entana tsy mitsaha-miakatra….
Andaniny, nihamafy ireny fitakiana samihafa ireny ny faran’ny herinandro ary dia namohizana ain’ny mpianatra tany Toamasina mihitsy. Ny rodobe miara-manonjan’ny mpanohitra tsy tanteraka teny an-kianja, saingy nampihitsoka ny lafim-piainana teto an-drenivohitra. Ny fepetra fitandroana filaminana izay natanjaka be toy ireny tany miady ireny no nahatsapana fa noraisin’ny fitondrana ho tany miady iny 24 ora volana feborary iny. Tsy teto an-drenivohitra ihany manko fa na Antsirabe na i Tsiroanomandidy dia nahenoana akony, satria be ireo niveri-dalana fa voasakana. Koa na tsy vory aza ny vahoaka, nahitana sarin’ny toe-draharaha aty Afrika rehefa misy fanonganam-panjakana ny miaramila mameno tanàna sy fiara mpiady mivoivoy eran’ny tanàna. Ireo nandao ny tokantranony aza saika tsy tafody noho ny sakana samihafa. Ny fanakanan-dalana fony fanjakana mizaka tena tamin’ny 2002 no tsy haiko. Fa dia izany no sary teto an-drenivohitra.
Nahitana fifanoheran’ny ankolafy misy eto amin’ny firenena iny 20 febroary 2021 iny. Ary ahatsapana ny halalin’ny aretina sy ny fivakivakisan’ny mpiray tanindrazana. Ny ampitson’iny toe-draharaha iny dia ny mpanao politika miaraka amin’ny fitondrana no niezaka niseho vahoaka, toy ny tany Toliara, fametrahana loholona….Fifanandrinana politika matanjaka no tantanina eto amin’ny firenena, fa dia maka sisiny aloha ny tena asa aman-draharaha.
Anisan’ny raharaha politika miditra amin’ny rafi-panjakana ankehitriny koa ny resaka « fianakaviana ». Nalaza tany Atsimo ny raharaha « Tinoka sy Fanapera ». Teto Antananarivo ny zanak’i maître Hanitra notronon’ireo mpisolovava. Nanjary nentanim-po koa ny hafa ka dia nampifandray izany amin’ny zanaky ny filoham-pirenena any ivelany. Miditra resaka taranaka sy fianakaviana koa ny politika ato ho ato, ary be ireo anarana voatonontonona etsy sy eroa. Misy moa ny mpitsoka afo fotsiny. Miditra amin’ny tantara vaovao ny fifanoherana ara-politika ary ny soatoavina fototra, hanorenana firaisam-pirenena, no rava any ifotony. Tsy resaka lalàna sy demokrasia, fa resaka « etika na moraly ». Miverina eto indray ny fanontanian’Iaveh tamin’i Kaina hoe « nataonao aiza ny rahalahinao ? Dia hoy i Kaina : « izaho angaha mpiambina ny rahalahiko ». Ny fifanandrinana vaky am-batolampy toy izao no ahitana fa tsy tarigetran’ny fanaovana politika intsony ny firaisam-pirenena sy firahalahiana. Efa lasan-ko razana ireo ray aman-dreny nahararin’ny firaisam-pirenena sy fitiavan-tanindrazana. Ireo zaza mpandova, samy te hibodo samirery ny fananam-pirenena sisa miady lova.
Mifandramatra ny mpirahalahy, ary voatery naka sisiny ny kely tsy mba mamindro. Manahirana ny miditra afovoany satria na ny lokon’ny fitafy aza nanjary nampiahiahy sy nampatahotra. Tato ho ato dia fanehoan-kery amin’ny endriny samihafa no loko sy sary avoakan’ny fahitalavitra. Ampahan’olona miady fo aman’aina sisa manao fampisehoana amin’ny famoriam-bahoaka hiventy ny hoe « tsara raha ny mpirahalahy » fa « tsy misy mpiambina ny rahalahy » ary « tsy misy afaka maka andraikitra amin’ny rahalahiny ».
Zotran’ny fanjakan’i Baroa izany. « Samia manamafy ny hidim-baravarany ». Tsy misy tantaram-pirenena iombonana, fa tantaram-pahefana no ifandroritan’ny « samy te haka ho azy ». Anjolofo ny fiarovana fahefana efa an-tanana satria be ny matahotra ho very fihinanana. Zary sehatra « fihinanana » sisa ny atao hoe « firenena » na hianatsimo ianao na hianatsimo atsinanana na hianavaratra na hiankandrefana ; ny tany, trano be fihinanana no natao havana, fa ny havana ? omby mahia, na havana raha misy patsa.
Matoan-dahatsoratra : Manorata tantara tsy mba miangatra ! - il y a 17 jours